Microsoft Office Preview Azo alaina amin'ny Takelaka Intel / x86 | Androidsis
Alexis Martinez | | Fampiharana Android, hevitra, Takelaka Android
Microsoft dia nanova be ny paikady nananany teo am-piandohana rehefa nanomboka nahazo sehatra teo amin'ny tsena ny Android, tetika iray izay miadana miova. Elaela izy ireo no niasa ka hatramin'ny volana vitsivitsy lasa izay, mpampiasa manana tablety Android dia nanana olana tamin'ny famoahana ny antontan-taratasiny vita amin'ny solosain'izy ireo miaraka amin'ny sehatr'i Microsoft Office.
Hitanay ihany koa ny fomba fiasan'ny Microsoft amin'ny fitaterana ireo rindranasa malaza indrindra ho an'ny solosaina eo amin'ny tontolon'ny Android, toa ny Outlook, Skype na Office, na dia misy aza ny fampiharana sasany izay amin'ny endrika beta na preview, toa ny Microsoft Office.
Noho ny fanavaozana vaovao nataon'ny orinasa naorin'i Bill Gates, ny takelaka Android miaraka amina processeur Intel / x86 dia afaka mankafy ity serivisy malaza ity. Na dia efa misy aza ny Preview Preview amin'ny takelaka Android sasany, misy ny hafa izay tsy afaka mankafy ity efitrano fiasana ity.
Ny Redmonds dia niasa mafy nitondra izany Fanohanana ireo rafitra vaovao misy maritrano x86, noho izany ny Microsoft Office Preview dia manomboka amin'ny fampiharana beta semi-privé mankany amin'ny fampiharana misokatra ho an'ny fitaovana Android rehetra. Ireo mpampiasa teo aloha izay efa tao amin'ny beta mihidy dia mety hahazo fidirana amin'ny topi-maso vaovao. Na izany aza, raha te hanandrana an'ity kinova misokatra an'ny Microsoft Office Preview ity ianao dia azonao atao amin'ny dobo fitsapana ao amin'ny Google+ ary any no hamindrana anao any amin'ny pejy beta tester isaky ny fampiharana hita ao amin'ny Google Play. Amin'izao fotoana izao dia tsy fantatra hoe rahoviana ny Microsoft Office no hitsahatra tsy ho Preview, saingy fantatra fa rehefa mifarana ny fotoam-pitsarana dia ho hita ao amin'ny Google Play store ireo rindranasa ireo.
Microsoft dia nandany taona maro mba hitondra ny iray amin'ireo sehatr'asa mandeha ho azy birao tsara indrindra misy eo amin'ny tontolon'ny telefaona finday, antenainay fa nandritra izay fotoana rehetra izay dia nanao fampiharana mendrika izy ireo, miaraka amina fampiasa maro, tsotra ary mifanaraka amin'ny refy samihafa amin'ny efijery izay eo amin'ny tsena Android. Amin'izany rehetra izany dia misy vaovao tsara amin'izao fotoana izao ary izany dia ilay mpampiasa izay matetika mampiasa an'io serivisy Microsoft io dia mifandray amin'ny fananana famandrihana Office 365 ary soa ihany (miampita ny rantsan-tànantsika isika mba hitohizan'izany) fa tsy misy fisoratana anarana ho an'ny takelaka Android . Ary ianao Manana ny Microsoft Office Preview napetraka ao amin'ny takelakao ianao ? Sa, tianao ny birao iray hafa?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Microsoft Office Preview misy amin'ny takelaka Intel / x86
Galaxy S6 sy S6 Edge dia tsy mivarotra betsaka araka ny nantenain'i Samsung